हाम्रो बारेमा | को AIRTOX कम्पनी
बाहिर AIRTOX कम्पनी
यहाँ हामी तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर हामी भेट्टाउनेछौं, हामी के गर्छौं र हामी कसरी सुरक्षित शूटीहरू सिर्जना गर्न सक्छौं?
को दन्त्यकथा AIRTOX
डेनिस डिजाइन र विकास
क्यारियर एटी AIRTOX
यो AIRTOX कम्पनी
At Airtox, हामी हाम्रो जुत्ता सुरक्षा फूटवेयर उद्योगमा देखिएको सबैभन्दा नवीन र ग्राउन्डब्रेकिंग टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित गर्दछौं। हाम्रो जुत्ताले सुरक्षात्मक औंला क्याप्स, असाधारण स्लिप प्रतिरोध र सबैभन्दा हल्का एन्टिफ्रेन्ट लेयर मार्केटमा देखाउँदछ। हाम्रो सुरक्षा जुत्तासँग इलेक्ट्रोस्टेटिक डिसिपिटेटिंग तलहरू (ESD) र शॉक एब्जर्बिंग इन्सोलहरू छन् जुन एक चिसो प्रभाव छ। Airtox सुरक्षा जुत्ताले सुपर प्रकाश र लचिलो मिडसोलहरू र अत्यधिक आरामदायक आउटसोलहरू प्रस्तुत गर्दछ। यस्का साथसाथै, AIRTOX सुरक्षा जुत्ताले वाटरप्रूफ र सास फेर्न अप्पर, एक मल्टि डट डायरेक्ट मसाज प्रणाली र फराकिलो स्कान्डिनेभिया फिट पनि प्रयोग गर्दछ। यी केवल केही सुविधाहरू हुन् जुन बनाउँछन् AIRTOX सुरक्षा जुत्ता बजार मा सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा जुत्ता।
AIRTOX को एक सफलता ब्रांड छ सुरक्षा जुत्ता सिधा बाहिर डेनमार्क.
हामी बनाउँछौं सुरक्षा जूता संग असाधारण गुणवत्ता र आराम, अझै पनी जबकि स्टाइलिश र फैशनेबल वर्ष दौर प्रयोग को लागी।
हाल, AIRTOX उत्पादनहरू विशेष रूपमा चयनित स्टोरहरूमा बेचिन्छ युरोप। हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रो विश्वव्यापी फुटप्रिन्ट विस्तार गर्नु र निकट भविष्यमा अझ बढि देशहरूमा हाम्रो उत्पादनहरू उपलब्ध गराउनु हो, धेरै मानिसहरूले डेनमार्कबाट हाम्रो महान सुरक्षा जुत्ताको आनन्द लिनका लागि।
हाल, हामी ध्यान केन्द्रित गर्दछौं विकास र निर्माण सुरक्षा फुटवेयर, र हाम्रा उत्पादनहरू ठूलो मात्रामा B2B मा बेच्दै। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यको अतिरिक्त, मा स्थानीय व्यापारहरूको निरन्तर समर्थन सुनिश्चित गर्न Airtox, हामी साना, र परिवार संचालित कम्पनीहरु को साथ भी सहयोग गर्छौं, जसको साथ हामी सफल र दिगो सम्बन्ध निर्माण गर्न गहन रूपमा काम गर्छौं। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी धेरैलाई सराहना गर्छौं।
हाम्रो सुरक्षा जुत्ता जाँच गर्नुहोस्
हाम्रो स्टोरहरु खोज्नुहोस्
को दन्त्यकथा AIRTOX ब्रान्ड
को अनुहार Airtox ब्रान्ड एक विशेषता, थोरै शिकारी चरा हो। यसको उत्पत्ति के हो? यसले के प्रतिनिधित्व गर्छ? र यसले सुरक्षा जुत्ताको भविष्यसँग के गर्नुपर्दछ?
यो AIRTOX हाम्रो सौर प्रणाली बाहिर टाढाको ग्रहबाट चरा पृथ्वीमा छोए। तिनीहरू उच्च चलाख, उन्नत बुद्धिमत्ताको साथ यांत्रिक प्राणीहरू हुन्।
तिनीहरू पृथ्वीमा आए र - अज्ञात कारणका लागि, तिनीहरूले विशेष गुणहरू भएको जुत्ता सिर्जना गर्न शुरू गरे, जुन जूता उद्योगमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। तिनीहरू यी क्रान्तिकारी उत्पादनहरू मानिसहरूसँग बाँडछन्। तपाईं तिनीहरूसँग कसरी जडान गर्ने भनेर निश्चित हुन सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरूको मानव संचारले विभिन्न प्रकारहरू लिन्छ।
विडंबनाको कुरा के हो भने, को सब भन्दा केन्द्रित गुँड मध्ये एक AIRTOX चराहरू कोपेनहेगन एयरपोर्टमा फेला पार्न सकिन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरू ठूलो दूरीमा यात्रा गर्दछन्, विशेष गरी बगालमा, उनीहरूको जनसंख्या विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन।
हामीलाई उनीहरूको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर हामी के जान्दछौं कि त्यो हो AIRTOX चराहरू अप्रत्याशित हुन्छन्, छिटो विकास गर्दछन्, र पृथ्वीमा कुनै पनि कुरा भन्दा धेरै प्राविधिक रूपमा उन्नत छन्। ज्ञान र टेक्नोलोजी उनीहरूले हामीसँग साझेदारी गर्छन्, हाम्रो जीवनलाई बढी आरामदायी, स्टाइलिश र सुरक्षित बनाउँदछन्।
कथाको उद्देश्य यस पक्षीको भ्रम पैदा गर्नु हो, जसले यस मा नियन्त्रण लिइरहेको छ AIRTOX पृथ्वीमा नयाँ प्रविधिको ल्याउने मिसनको साथ आर एन्ड डिभिजन, अन्तर्ग्रहणीय गोलार्द्धबाट हामीलाई सबैभन्दा परिष्कृत, अल्ट्रा आरामदायक जुत्ताहरू सिर्जना गर्न दिनुहोस्। जुत्ताहरू जुन फन्सेसेटसँग भरिएका छन् र यो विश्व प्रविधिहरूको बाहिर।
डेनिश डिजाइन र उत्तम सुरक्षा जुत्ताको विकास
AIRTOX मुख्यालय मा आधारित छन् डेनमार्क। यहाँबाट, सबै डिजाइन, विकास र अनुसन्धान गरिन्छ। हामीले अनुसन्धान टेक्नोलोजीहरू, र परीक्षण सामग्री, घटक र नयाँ प्रणालीहरूको लागि समय र संसाधनहरूको एक विशाल मात्रा समर्पित गरेका छौं।
हाम्रो आर एन्ड डी टोलीसँग सुरक्षा फुटवेयरमा २०+ वर्षको अनुभव छ र पहिलो विकास स्केचबाट अन्तिम उत्पादसम्म सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया ट्र्याक राख्छ।
हामी धेरै उत्पादनहरूमा हाम्रो उत्पादनहरूको परीक्षण गर्दछौं
हामी हाम्रो सबै उत्पादनहरूको विश्वसनीयता र गुणवत्ताको ग्यारेन्टी दिन्छौं। हाम्रो प्रतिस्पर्धी को एक ठूलो हिस्सा विपरीत, हामी सम्झौता गर्दैनौं। हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो ग्राहकहरु को सन्तुष्टि हो।
हामी एक्सटेंसिभ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछौं
हाल त्यहाँ पाँच छन् प्रविधिहरू कि मा उपलब्ध छन् Airtox जुत्ताको चयन, Aqua-Cell®, WHITELAYER®, UTURN®, Cool&Me® र POWERBREEZE®। यी प्रविधिहरूलाई होशियारीपूर्वक ईन्जिनियर गरिएको छ by AIRTOXको विशेष एकाई "ल्याब ”२"।
हामी भविष्यबारे सोच्दछौं
At AIRTOX हामी सुरक्षा फुटवेयर उद्योगमा नयाँ प्रवृत्ति विकास गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्रिय छौं। हाम्रो लक्ष्य अभिनव रहने र उद्योगको पहिलो स्थानमा रहेको छ। नयाँ प्रविधि अझै कार्यान्वयन भएको छैन Airtox उत्पादनहरू परिक्षण गरिन्छ, र तिनीहरूको परिचयका फाइदाहरू छलफल गर्नका लागि निश्चित गरिएको छ Airtoxको अल्ट्रा लाइटवेट सुरक्षा जुत्ता बजारमा सब भन्दा उन्नत हो।
हाम्रो उत्पादनहरू जाँच गर्नुहोस्
मिशन र दृष्टि
हाम्रो दृष्टिकोण र समग्र लक्ष्य औद्योगिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सबैभन्दा अनौठो र नवीन ब्रान्ड बन्ने छ।
यस लक्ष्यमा पुग्नको लागि, हामी हालसालै विश्व संस्कृतिहरूको ज्ञान र प्रेरणाको उपयोग गर्ने लक्ष्यमा छौं। हामी यो काम संसारभरका व्यक्ति र कम्पनीहरूसँग मिलेर र हाम्रो कार्यस्थलमा बहु-राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गरेर गर्छौं।
कार्य प्रक्रियाको क्रममा, हामी सबै एकल सहकर्मीको उत्प्रेरणा र समर्पण पूर्णतामा द्रुत हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी सामाजिक जिम्मेवारीहरू र ठूलो कार्य अवस्थाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं।
हामी हाम्रो वातावरणको संरक्षणको बारे ख्याल राख्छौं र यो सुनिश्चित गर्न कि हामी दुबै आफैं र हाम्रा सबै आपूर्तिकर्ताहरु सबै अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय वातावरणीय कानूनहरुको कडाईका साथ पालन गर्न प्रतिबद्ध छौं।
मा क्यारियर AIRTOX
मा क्यारियर AIRTOX र सामाजिक उत्तरदायित्व:
हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो कामदारहरु राम्रो काम को स्थिति प्रदान गर्दै छ। हाम्रो विश्वास छ कि हाम्रो कम्पनीको सकारात्मक विकासमा हाम्रा कर्मचारीहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सहज काम गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्न यो महत्त्वपूर्ण महत्त्वको हुनेछ। त्यसकारण हामीसँग हाम्रो स्टाफ र सहयोगीहरूको लागि खुला, गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण छ र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि विविधता र आत्म-विकास समर्थित छ।
हामी एक वैश्विक आचार संहिता अनुसरण गर्दछौं, विश्वव्यापी आधारमा नैतिक र जिम्मेवार व्यवहारमा अनेक मौलिक सिद्धान्तहरू समावेश गर्दछ। हाम्रा सबै सहयोगी आपूर्तिकर्ताको लागि हामी निम्न कुराको ग्यारेन्टी गर्दछौं: सबै रोजगार सम्बन्धहरू संयुक्त राष्ट्र संघको कन्भेसनको आधारभूत आधारभूत आवश्यकताहरूको पालना गर्दछन्।
हामी सधैं आफ्नो टोलीमा योगदान दिन नयाँ प्रतिभा खोज्दछौं। यदि तपाईं हाम्रो रमाईलो, छिटो र नवीन वातावरणमा काम गर्न पर्याप्त बहादुर हुनुहुन्छ भने, आवेदन दिनुहोस् र हामीलाई आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्!